Onye ndu uwa klaasị nke ngwa eji esi nri / ROBAM
Akụkụ nke usoro 671
Akụkụ Absorption Range Hood
DEFENDI Ọkụ usoro
Wuru na Microwave oven
Hood New Range Hood A830
Nọrọ jụụ, belata mkpọtụ mkpọtụ na 42dB na ịgba agba nkịtị.
Inogide, elu n'ụzọ zuru ezu nchọ moto na ọhụrụ ọla kọpa jụrụ usoro. Na-adịru mgbe ebighị ebi.
Eco, chekwaa ihe ruru 30% nke ike ike yana arụmọrụ nke ọma.
Wuru na-Electric oven R312
Black igwe anaghị agba nchara iko panel, kpochapụwo Black Mirror, mfe ma nkecha; ọkwa dị elu Aluminom Alloy Super Long njikwa, dị mma ma dịkwa mma, dị mfe imeghe ma mechie; mgbanwe mmapụta akpu, onye aka ozugbo-adịghị ahụ anya, na aka button wetara zuru okè ahụmahụ nke adaba ọrụ;
Dekọ ọtụtụ narị nnwale site na ụlọ nyocha larịị 4000㎡ anyị.
N'ime ezinụlọ 35000000 na-ekpori ndụ dị mfe site na Robam n'ụwa niile.
10000 + ụlọ ahịa na-ere ahịa
Mepụta Sweettọ Sweettọ niile nke kichin maka ụmụ mmadụ
N'ime afọ 30 gara aga, a raara robam maka ịbịaru nso
ROBAM Range Hood - Nke 1 na Ahịa forwa maka Afọ 5 Na-esote
N'oge na-adịbeghị anya, dịka data sitere n'aka Euromonitor International, ụlọ ọrụ nyocha ahịa zuru ụwa ọnụ, site na 2015 ruo 2019, mkpuchi dị iche iche nke ROBAM ebutela ahịa ụwa ruo afọ ise, na-agbakwunye ntọala ROBAM maka imepụta akara ụwa ma gosipụta ROBAM en ...
Iji mepụta ndụ mmadụ nke kichin agụụ niile